Maxay tahay sababta aan Shabakad loogu xiriirin Manhaj kasta? | Martech Zone
Galabtaan waxaa laygu casuumay qado aan caadi aheyn iyo wadahadal lala yeeshay Kuliyadda Ganacsiga ee Indiana Kuliyadda Harrison. Indiana ayaa caan ku ah haysashada qaar ka mid ah iskuulada ugu wanaagsan dalka, iyo adduunka, laakiin dadka Harrison waxay garwaaqsan yihiin inaan ku jirno adduun si dhaqso leh isu beddelaya. Waxay sameynayaan riix dagaal si ay u hubiyaan inay ka sii hormari doonaan qallooca.
Intii aan wada hadlaynay, waxaan gartay inay jiraan hal qalab dhalaalaya oo ka maqan manhajka ardayda maalmahan. Si fudud loo dhigo, waa sida loo sameeyo network (iyada oo aan lahayn iyo tiknoolaji) Ardayda badankood waxaa looga baahan yahay inay qaataan fasalo sida Hadalka Dadweynaha markay qalin jabiyaan, laakiin marar dhif ah ayaa lagu baraa muhiimada iyo awooda isku xirnaanta.
Waxaan leeyahay saaxiibo isku dhow oo aan ka qoomameyno inaysan ka qeybgalin munaasabadaha gobolka ayna ku xirnaadaan madaxdii hore ee ay lasoo shaqeeyeen. Sannado ka dib, waxay ogaadeen inay ka dhuunteen tooshka oo ay hadda u baahan yihiin inay 'la qabsadaan' si ay u helaan jixinjixin si ay u helaan shaqada ama fursadda ay raadinayaan. Si fudud dib ugama heli kartid waqtigaas!
Inta badan waqtigeyga waxaan ku qaatay meel ka baxsan shaqadeyda aasaasiga ah waxaan ku qaatay isku xirnaan. Xiriirinta ayaa hubaal ah # 2 liistadayda sida aan waqtigayga u maalgaliyo (# 1 waxay si fiican u fulineysaa shaqadayda hadda!). Ku dhow # 3 waxaa laga helayaa waqtiga iyo fursadda looga shaqeynayo meherado cusub ama shaqooyin dhinac ah. Taasi waa sax - runti waxaan shabakadda ka dhigay mudnaan ka weyn sidii aan u sameyn lahaa dakhli labaad!
Sababta waa fududahay - isku xirka wuxuu ii horseeday inaan helo shaqadayda aasaasiga ah sidookale waxay horseedday dhamaan fursadaha dugsiga sare. Shabakadda la'aanteed, anigu ma joogi doono meesha aan joogo - mana lahaan lahayn fursado ii furmay si aan u aado halka aan ku xigi doono.
Isku xirka waa maalgashi
Isku xirka waa maalgashi. Dusha sare, waxay u muuqan kartaa inaad waqti iyo tamar ku bixinaysid la-talin, adeegyo ama aad ku kordhinaysid shabakaddaada lacag la'aan. Si kastaba ha noqotee, xiriiriyadan waxaad ku kasbaneysaa kalsoonida dadka iyo inaad ku dhisatid awood ku saabsan mowduuca aad gacanta ku hayso.
Xaalad ahaan, waxaan fasax ka qaatay shaqada maanta. Waxaan maalintii la qaatay la sheekaysiga xeeladaha isku xidhka bulshada Kuliyadda Harrison, latashi BioCrossroads dhisida joogitaankooda khadka tooska ah, iyo ka qaybgalka an Ganacsade Indiana Shirka Gudiga Hogaaminta - dhamaan xiriirkeyga shabakada!
Manhaj isku xira
Haddii iskuulku dalbanayo kuhadalka dadweynaha sida xirfad loo baahan yahay, barayaashu waa inay siiyaan isku xirnaanta dareenka ay mudan tahay. Ardayda waa in wax lagu baro sida loo helo fursadaha isku xirnaanta, sida loo jiheeyo loona kobciyo xiriirkooda shabakadeed, kobcinta joogitaanka khadka tooska ah - iyo sidoo kale sida looga faa'iideysto dhammaan waxyaabaha kor ku xusan. Haddii aadan buuxin karin koorso la aqoonsan yahay oo ku saabsan mowduuca, waxaan rajeynayaa inaan arko jaamacadaha iyo kulliyadaha oo horumarinaya aqoon isweydaarsiyo ku saabsan mowduuca.
Haddii aad jeclaan lahayd xoogaa caawimaad ah tan, si xor ah u hesho ila soo xiriir!
Tags: ilaha macluumaadkalaura lippay
Ka warbixinta Warbixinta Xatooyada ee Adsense iyada oo ah Xadgudub DMCA ah
Jul 21, 2008 markay tahay 9:16 PM
Fikrad aad u fiican.
Iyada oo ardayda jaamacadda MySpace iyo Facebook ay ku jiraan dariiqyada ugu hooseeya ee xiriirka bulshada. Kaliya waxay u baahan yihiin macluumaad ku saabsan sida loo geeyo heerka xiga.
Jul 21, 2008 markay tahay 9:46 PM
Siyaabaha qaarkood, haa. Si kastaba ha noqotee, ardayda kuleejka sidoo kale way caqli badan yihiin adeegsiga shabakadahaas. Qalad keliya oo xagga xukunka ah ayaa baabi'in kara sumcadda qofka sannado badan oo soo socda!
Aynu rajeyno inaan aragno manhajkan oo qaab yeelanaya sanadaha soo socda.
Jul 22, 2008 markay ahayd 12:22 AM
Taasi waa hal shay oo aan u baahanahay inaan wax badan ka qabto waa isku xirka. Waxaan kuhelay khadka tooska ah laakiin waan sameyn karaa waxbadan oo kulanka ah oo aan salaamo asxaabteyda aduunka dhabta ah. Waa inaan raadsadaa dariiq aan ugu habboonaado inta u dhexeysa dugsiga iyo shaqada .. waa waajib in dhabtii la sameeyo.
Jul 22, 2008 markay ahayd 6:12 AM
Haddii si sax ah loo isticmaalo, isku xirka waa mid aad u awood badan. Iyada oo loo marayo fagaarayaasha iyo facebook, waxaan ku soo uruuriyay koox yar oo ka wada shaqeysa abuurista alaabada loo yaqaan 'clickbank'. Waxay u egtahay qaybinta shaqada, halkaas oo shaqadu si hufan u qabato. Sidoo kale isku xirka ama kooxaha maleegayaasha ah sida qaar ugu yeeraan, waayo-aragnimada waxbarashaddu waa midda labaad. La kulanka iyo ka wada hadalka arrimaha / dhibaatooyinka dadku waxay garaacaan ebook kasta wakhti kasta oo sanadka ah. Kaliya 2 senti.
Oktoobar 27, 2009 at 1:38 PM
haa waad saxan tahay, aragtidayda waxyaabo aad u yar oo adduunkan ka jira ayaa wax walba beddeli kara, kuwani waa mid ka mid ah waa shabakad, kan kalena waa wada shaqeyn kooxeed. , haddii ur in network waxaad fursad u leedahay inaad ogaato dhamaan xubnaha xubnahooda iyo fikradahooda sidaa darteed fikradahaas oo dhan + kuwaaga adigu sidaa darteed aqoontaada ur ayaa la kordhin doonaa oo waxay la mid noqon doontaa dhamaan xubinta ku jirta shabakada fursad ayey u helaan inay ku kordhiyaan aqoontooda becoz aqoontu waa ka xoog badan wax kasta,
Waad ku mahadsan tahay wadaagista maqaalkan cajiibka ah ee i siinaya inaan la wadaago aragtidayda halkan.
Oktoobar 28, 2009 at 9:04 AM
Waxaan u maleynayaa inaad cusbooneysiin karto boostadaada tan iyo markii IBC magaceeda loo beddelay Harrison College.
Waxaan hayaa wax badan oo aan ka idhaahdo waxa aan u sheego ardaydayda isku xidhka khadka tooska ah
Oktoobar 29, 2009 at 2:00 AM
Cusbooneysiiyay Thomas! Waxaan u maleynayaa inaad sameyneyso shaqo fantastik ah oo u horseedeysa ardaydaada tusaale ahaan baraha bulshada iyo isku xirka bulshada.